Safflower Jaale Color, Safflower Yellow Color Bixiyeyaasha, Safflower Yellow Color Manufacturers, Safflower Yellow Color Dhoofiyayaasha
Midabka Jaalaha ah ee Safflower
[Ku saabsan Jaalle Safflower]
Safflower Yellow waa midab cunno dabiici ah oo laga soosaaray caleenta Carthamus Tinctoria L. iyadoo laga soo saarayo, la sifeynayo, loo sifeeyo, la isugu geeyo, la nadiifiyo, la buufiyo, lana qalajiyo. Maaddada ugu weyn ee midabaynta waa kaararka.
Muuqaalka safflower huruud waa huruud ama bunni huruud budo ah. Waxay si fudud ugu milmi kartaa biyaha iyo xalka ethanol, laakiin kuma jiraan ether, batrool ether, saliid iyo acetone. Waa wakiil midabeyn aad u wanaagsan u leh istaarijka, laakiin waxyar u rinjiyeynta borotiinka. Ferricon ion waxay ka dhigi kartaa madow. Waxay leedahay iska caabin wanaagsan iftiinka iyo heerkulka sare.
Jaale ama bunni Yellow Powder
% 1% 、 1cm 、 390 ～ 410nm）
In ka badan 40 (400nm)
Mercury ppm In ka yar
Wadarta Tirada Tirada cfu / g Kayar
Jaale Safflower ayaa si ballaaran loogu isticmaali karaa midabaynta cabitaanka, khamriga, nacnaca. Miraha qasacadaysan, jalaatada, barafka-lolly, jelly, miraha la ilaaliyay. Tixraaca adeegsiga ee 50 CV waa 0.01 ~ 0.02% .Tirada isticmaalka waa la dhimi karaa haddii CV-gu ka badan yahay 50.
Weel caag ah (ama warqad) ah oo ay ku jiraan baco gudaha ka sameysan Miisaanka saafiga ah ee weel walba waa 10kg ama 20kg. Heerarka xirmooyinka sidoo kale waa la heli karaa iyadoo loo eegayo baahida macaamilka.
Shaabadaysan, iska ilaali iftiinka, ku kaydi meel qabow oo qalalan.
12 bilood laga bilaabo taariikhda wax soo saarka haddii xaalada keydinta ay gaarto sida aan kor ku soo sheegnay. Marka la furo, waa in dib loo xirxiraa oo la adeegsadaa 6 bilood gudahood.